GỤỌ NKE Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bislama Brazilian Sign Language Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Colombian Sign Language Croatian Czech Dangme Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Italian Sign Language Japanese Japanese Sign Language Kazakh Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Kwangali Lingala Lithuanian Luo Malagasy Maltese Myanmar Ngabere Norwegian Nzema Oromo Polish Portuguese Quechua (Bolivia) Romanian Russian Russian Sign Language Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Thai Tigrinya Tsonga Turkish Twi Ukrainian Uruund Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
“Ihe ahụ merenụ gbawara m obi. Ihe na-agara m siriri werere, ma na mberede, ihe niile funahụrụ m.”—MAK. * Ya na nwunye ya gbara alụkwaghịm kemgbe otu afọ.
“Di m na otu nwa agbọghọ ya na ada anyị bụ ọgbọ kwara iko. Mgbe anyị gbara alụkwaghịm, ahụ́ bịara ruo m ala maka na ọ gaghịzi na-ewesa m iwe ọkụ ọ na-ewe. Ma, ihe a merenụ mechuru m ihu ma mee ka ọ dị m ka ọ̀ bụ na mụ abaghị uru.”—ESTA. Ya na di ya gbara alụkwaghịm kemgbe afọ iri na asaa.
Ihe mere e ji gbaa ụfọdụ ụmụ nwaanyị alụkwaghịm * bụ na di ha chere na ihe ga-akara ha mma ma ha gbaa ha alụkwaghịm. E nwekwara ụfọdụ ụmụ nwaanyị ji aka ha gbaa di ha alụkwaghịm. Ma, ọtụtụ ndị gbara di ha ma ọ bụ nwunye ha alụkwaghịm na-achọpụtakarị na ihe na-adịrị ha njọ karịa otú ha tụrụ anya ya. Ọ bụrụ na di gị gbara gị alụkwaghịm n’oge na-adịbeghị anya, ị ga-achọpụta na ihe a so n’ihe kacha njọ metụrụla gị. N’ihi ya, ọ ga-adị mma ka anyị leba anya n’ụfọdụ ndụmọdụ Baịbụl nyere, bụ́ ndị nwere ike inyere gị aka idi nsogbu ndị na-abịara ndị gbara alụkwaghịm.
NSOGBU NKE MBỤ: OBI ỌJỌỌ GA NA-EME GỊ.
E nwere ọtụtụ ihe na-enye nwaanyị di ya gbara alụkwaghịm nsogbu n’obi. Ụfọdụ n’ime ha bụ otú ọ ga-esi na-akpata ego ga-ezuru ya, otú naanị ya ga-esi azụ ụmụ ha, na otú naanị ya ga-esizi nọrọ. O nwere ike ihe ndị a agaghị apụ ya n’obi ngwa ngwa. Otu ọkachamara nwụrụla anwụ aha ya bụ Judith Wallerstein chọpụtara na ụfọdụ ụmụ nwaanyị ndị di ha gbara alụkwaghịm ka na-eche na a ghọgburu ha aghọgbu ma ọ bụ na a jụrụ ha ajụ n’agbanyeghị na o nwere ike ịbụ na ọtụtụ afọ agafeela kemgbe a gbara ha alụkwaghịm. Ha na-eche na “ụwa nke ha dị iche, nakwa na a hụghị ha n’anya.”
Bee ákwá ma ọ bụrụ na ákwá agụọ gị. O nwere ike ịbụ na obi gị ka dị n’ebe di gị ahụ nọ. Ọ bụrụgodị na ọ na-emesi gị ike mgbe ahụ unu bi, ị ka nwekwara ike ibe ákwá maka na ọ bụghị ihe ị tụrụ anya ya ka ị hụrụ. (Ilu 5:18) Ihere emela gị ibe ákwá n’oge a bụ́ “oge ịkwa ákwá.”—Ekliziastis 3:1, 4.
Anọla naanị gị mgbe niile. Ọ bụ eziokwu na i kwesịrị ịnọ naanị gị mgbe ụfọdụ bee ákwá, ma onye ma ihe agaghị anọ naanị ya ruo ogologo oge. (Ilu 18:1) Mgbe gị na ndị enyi gị na-akparịta ụka, na-ekwu ihe ga-agba ha ume n’ihi na ọ bụrụ na ị na-emekarị mkpesa banyere di gị, ndị mmadụ nwere ike gbawara gị ọsọ, a sịgodị na ihe ị na-ekwu bụ eziokwu. Ọ bụrụ na e nwere mkpebi ndị dị mkpa ị ga-eme obere oge di gị gbachara gị alụkwaghịm, bụrụ ụzọ kọsara ya onye ị tụkwasịrị obi, bụ́ onye na-agaghị agwa gị naanị ihe ị chọrọ ịnụ.
Lebara onwe gị anya nke ọma. Oké echiche ndị di ha gbara alụkwaghịm na-eche nwere ike ịkpatara ha nsogbu ndị dị ka ọbara mgbali elu na oké isi ọwụwa. N’ihi ya, ọ ga-adị mma ka ị na-eriju afọ, na-emega ahụ́ ma na-ehi ụra nke ọma.—Ndị Efesọs 5:29.
Wepụsịa ihe ndị na-echetara gị ihe ọjọọ di gị mere gị. I nwekwara ike iwepụsị ihe ndị na-adịzighị gị mkpa, ma etufula akwụkwọ ndị baara gị uru. Ọ bụrụ na iwe na-ewe gị ma ị hụ foto agbamakwụkwọ unu ma ọ bụ ihe yiri ya, tinye ya n’ime igbe ma dowere ya ụmụ gị.
Gbalịa ka ị kwụsị ịna-eche ihe ga-eme ka obi jọọ gị njọ. O nwere otu nwaanyị gbara di ya alụkwaghịm maka na di ya kwara iko. Aha nwaanyị a bụ Olga. Olga sịrị na ya na-ajụkarị onwe ya, sị, “Gịnị ka nwaanyị a ya na di m kwara iko nwere m na-enweghị?” Ma Olga mechara chọpụta na ichewe ụdị ihe a nwere ike ime ka ‘obi daa ya mbà.’—Ilu 18:14.
Ọtụtụ ndị achọpụtala na ide ihe ndị na-enye ha nsogbu n’obi ede na-eme ka ha kwụsị ichegbu onwe ha. Ọ bụrụ na i dee ihe ndị na-enye gị nsogbu, gbalịa ka i cheta ezigbo ihe ndị ị ga na-eche n’echiche. (Ndị Efesọs 4:23) Leba ihe atụ abụọ a anya:
Ihe na-enye m nsogbu n’obi: Ọ bụ m mere ka di m gaa kwaa iko.
Ihe m ga na-echeta: Di m ekwesịghị ịga kwaa iko maka na mụ ezughị okè.
Ihe na-enye m nsogbu n’obi: Oge niile mụ na ya biri lara m n’iyi.
Ihe m ga na-echeta: Obi ga-aka adị m ụtọ ma m hapụ ihe ndị merela eme lekwasị anya n’ọdịnihu.
Etinyela obi gị n’ihe na-akpasu iwe ndị mmadụ na-ekwu. Ndị enyi gị na ndị ikwu gị, bụ́ ndị hụrụ gị n’anya, nwere ike ikwu ihe ụfọdụ ga-ewute gị ma ọ bụdị ihe ndị na-abụghị eziokwu gbasara gị. Dị ka ihe atụ, ha nwere ike ịsị: ‘Ọ bụdịghị ụdị onye ahụ kwesịrị ịlụ gị’ ma ọ bụkwanụ ‘Chineke kpọrọ ịgba alụkwaghịm asị.’ * Ọ bụ ya mere Baịbụl ji nye anyị ndụmọdụ a: “Etinyekwala obi gị n’okwu niile ndị mmadụ pụrụ ikwu.” (Ekliziastis 7:21) Martina, bụ́ onye di ya gbara alụkwaghịm kemgbe afọ abụọ, sịrị: “Kama ichegbuwe onwe m n’ihi ihe na-akpasu iwe ndị mmadụ na-ekwu, m na-agbalị ka m na-ele ihe anya otú Chineke si ele ya. Otú o si eche echiche dị elu karịa otú anyị si eche.”—Aịzaya 55:8, 9.
Kpegara Chineke Ekpere. Chineke gwara ndị na-efe ya ka ha ‘na-atụkwasị ya nchegbu ha niile,’ nke ka nke, ma ọ bụrụ na e nwere ihe na-enye ha oké nsogbu.—1 Pita 5:7.
MEGODỊ IHE A: Dee amaokwu Baịbụl ndị ga-enyere gị aka ma mapawa ha n’ebe ị ga na-ahụkarị ha. E wezụga amaokwu Baịbụl ndị anyị kwurula okwu ha n’isiokwu a, ndị nke a abaarala ọtụtụ ndị di ha gbara alụkwaghịm uru: Abụ Ọma 27:10; 34:18; Aịzaya 41:10; Ndị Rom 8:38, 39.
Kwe ka Okwu Chineke nyere gị aka idi nsogbu bịaara gị
NSOGBU NKE ABỤỌ: Ị MAGHỊ OTÚ Ị GA-ESIZI NA-EMESO ONYE AHỤ BỤ́BU DI GỊ.
Otu nwaanyị a na-akpọ Juliana, bụ́ onye ya na di ya biri afọ iri na otu, sịrị: “M rịọrọ di m ka ọ ghara ịhapụ m. Ma mgbe ọ hapụrụ m, m bidoro na-ewesa ya na nwaanyị ọ lakwuuru iwe.” Ọtụtụ ndị ha na di ha gbara alụkwaghịm na-eburu di ha iwe n’obi ruo ọtụtụ afọ. Ma, ụfọdụ n’ime ha na di ha ka ga na-ekwurịta okwu, ma hà chọrọ ya ma ọ bụ na ha achọghị ya, karịchaa, ma ọ bụrụ na ha mụrụ ụmụ.
Ekwela ka gị na onye ahụ bụ́bu di gị kpachiwe anya. Ka ihe gị na ya ga-ekwu bụrụ naanị ihe dị mkpa, kwuokwa ya ná nkenke. Ọtụtụ ndị achọpụtala na ime otú a na-eme ka udo dị.—Ndị Rom 12:18.
Ejila iwe agwa ya okwu. Baịbụl sịrị: “Onye ọ bụla nke na-adịghị ekwu ọtụtụ okwu maara ihe.” (Ilu 17:27) Ihe a Baịbụl kwuru bara uru, nke ka nke, ma ọ bụrụ na ọ dị gị ka ọ̀ na-agwa gị ihe ị na-achọghị ịnụ. Ọ bụrụ na o nweghị otú ị ga-esi eme ka ihe unu na-akpa ghara ịdara unu ọgụ, i nwere ike ịsị ya: “M chọrọ ichebara ihe i kwuru echiche, e mechaa anyị ekwuo.”
Ọ bụrụ na i nwere ike ime ya, gbalịa ka i wepụta ihe ndị bụ́ nke gị iche, dị ka akwụkwọ gbasara ahụ́ ike na ego.
MEGODỊ IHE A: Mgbe ọ bụla ọzọ gị na onye bụ́bu di gị na-akparịta ụka, lee ma ị̀ ga-ahụ ihe na-egosi na ị na-arụ ụka na-enweghị isi ma ọ bụ na-esi ọnwụ ma ọ bụkwanụ ma yanwa ọ̀ na-eme otú ahụ. Ọ bụrụ na ọ dị otú ahụ, gwa ya ka unu kwụsịtụ ma kwuchaa ya mgbe ọzọ. I nwekwara ike ịgwa ya ka unu jiri iimel kparịta ya.—Ilu 17:14.
NSOGBU NKE ATỌ: Ị MAGHỊ OTÚ Ị GA-ESI ENYERE NWA GỊ AKA KA O DIE IHE MERENỤ.
Otu nwaanyị aha ya bụ Maria chetara ihe mere mgbe ya na di ya gbachara alụkwaghịm. Ọ sịrị: “Nwa m nwaanyị nke nta nọ na-ebe naanị ákwá. O bidokwara ịba mamịrị n’ute. Nwa m nwaanyị nke tọrọ ya na-eme ka à ga-asị na o nweghị ihe merenụ, ma m chọpụtara na ihe ahụ kpakwara yanwa aka ọjọọ.” Ma, o nwere ike ịdị gị ka ọ̀ bụ na ị gaghị enweli ohere ma ọ bụ ume ị ga-eji nyere ụmụ gị aka mgbe ha chọrọ ka i nyere ha aka.
Gwa nwa gị ka ọ kọọrọ gị ihe na-echegbu ya, ọ bụrụgodị na ọ dị gị ka ihe ọ na-ekwu ọ̀ bụ “okwu nzuzu.”—Job 6:2, 3.
Enyela nwa gị ọrụ ọ na-ekwesịghị ịrụ. Ọ bụ eziokwu na o nwere ike ịbụ na ị chọrọ inweta onye ga na-akasi gị obi, ya abụrụkwa na ọ dị gị ka nwa gị ọ̀ chọrọ ịna-akasi gị obi, buru n’obi na ọ dịghị mma ka ị gwa nwatakịrị ka o mewere gị ihe onye torola eto kwesịrị imere gị. (1 Ndị Kọrịnt 13:11) Nwa gị ekwesịghị ịbụ onye ị ga na-akọsara ụwa gị ma ọ bụ onye ị ga na-ezi ozi ka o zie onye bụ́bu di gi ma ọ bụ onye ga na-ekpeziri gị na ya.
Ekwela ka ihe a merenụ ghasasịa ndụ nwa gị. Ọ bụrụ na unu ebiri ebe unu bibu ma na-eme ihe ndị unu na-emebu, ọ ga-enyere unu aka, karịchaa, ma ọ bụrụ ihe ndị gbasara ofufe Chineke, dị ka ịgụ Baịbụl na inwe ofufe ezinụlọ.—Diuterọnọmi 6:6-9.
MEGODỊ IHE A: Tupu izu a agwụ, gwa ụmụ gị na ị hụrụ ha n’anya nakwa na ọ bụghị ha kpatara gị na di gị ji gbaa alụkwaghịm. Zaa ha ajụjụ ha jụrụ, ma azala ha ya ka à ga-asị na ị na-ata di gị ụta.
I nwere ike idi nsogbu ndị na-abịara ndị di ha ma ọ bụ nwunye ha gbara alụkwaghịm. Otu nwaanyị aha ya bụ Melissa, onye ya na di ya biri afọ iri na isii, sịrị, “Mgbe anyị gbachara alụkwaghịm, m gwara onwe m, sị, ‘Ihe a abụghị otú m tụrụ anya na ndụ m ga-adị.’” Ma ugbu a, ọ na-enwe obi ụtọ n’agbanyeghị nsogbu ya. Ọ sịrị, “Ahụ́ bịara ruo m ala ozugbo m kwụsịrị ichegbu onwe m maka ihe ndị merela eme.”
^ para. 4 Ọ bụ eziokwu na ndị a kacha kwuo okwu ha n’isiokwu a bụ ụmụ nwaanyị di ha gbara alụkwaghịm, ma ihe niile e kwuru gbasakwara ụmụ nwoke nwunye ha gbara alụkwaghịm.
^ para. 18 Mmadụ ịghọ di ya ma ọ bụ nwunye ya aghụghọ ma gbaa ya alụkwaghịm jọgburu onwe ya n’anya Chineke. Ma, ọ bụrụ na di ma ọ bụ nwunye akwaa iko, Chineke nyere onye nke aka ya dị ọcha ikike ikpebi ma ọ̀ ga-agba ya alụkwaghịm ka ọ̀ ga-ahapụ ịgba ya. (Malakaị 2:16; Matiu 19:9) Gụọ isiokwu bụ́, “Echiche nke Baịbụl—Ụdị Ịgba Alụkwaghịm Dị Aṅaa Ka Chineke Kpọrọ Asị?” Ọ gbara na Teta! May 8, 1994. Ọ bụ Ndịàmà Jehova bipụtara ya.
M̀ beela ákwá juru m obi kemgbe mụ na di m gbara alụkwaghịm?
Olee otú m nwere ike isi kwụsị iburu onye bụ́bu di m iwe n’obi?